ရာသီအသစ်၊ လက်နက်အသစ် နဲ့ ယာဉ်အသစ်တွေပါလာမယ့် PUBG Mobile Update
8 Nov 2018 . 12:25 PM
Tencent Games က PUBG Mobile Player တွေအတွက် မိုးလေကြမ်းကြမ်းနဲ့ သဘာဝကျကျ တိုက်ပွဲဝင်ရမယ့်အစီအစဉ်တစ်ခုကို စတင်စမ်းသပ်နေပါပြိ။ မိုးရာသီ၊ နှင်းတွေကိုမြင်ရမယ့် Snow Area၊ လက်နက်အသစ်တွေနဲ့ စက်တပ်ယာဉ်အသစ်တွေပါဝင်မယ့် Beta Version ကိုတရုတ်ပြည်တွင်းမှာ စမ်းသပ်ကစားနိုင်ဖို့အတွက်ထုတ်ပေးလိုက်ပါပြီ။ Reddit User တွေရဲ့ ပြန်လည်ပြောဆိုချက်အရ အခု Feature အသစ်တွေဟာ လာမယ့် PUBG Stable Update Version မှာပါဝင်လာမှာဖြစ်ပြီး Version Build No ကတော့ 0.11.0 ဖြစ်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။
PUBG Mobile ဟာ Timi နဲ့ Lightspeed ဆိုပြီး Version ၂မျိုးခွဲထားပါတယ်။ Timi ကတော့ တရုတ်ပြည်တွင်း App Market မှာသာရရှိနိုင်ပြီး Lightspeed ကတော့ Global အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ အထက်မှာပြောခဲ့တဲ့ Feature အသစ်တွေဟာ Timi ရော Lightspeed Version ၂မျိုးလုံးအတွက် တရုတ်မှာ စမ်းသပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။
လက်နက်သစ်အနေနဲ့ PC Version က MK 47 သေနတ်အသစ်ပါဝင်လာမှာဖြစ်သလို၊ ယာဉ်အသစ်အဖြစ် Tuski လို့ခေါ်တဲ့ Three Wheeler Rickshaw (သုံးဘီးဆိုင်ကယ် သို့ စက်ဘီး) နဲ့ Snow Area ကိုတော့ Sanhok Maps ထဲမှာသာ တွေ့မြင်ရနိုင်ပါတယ်။
MK 47 ကတော့ Erangel ၊ Miramar နဲ့ Sanhok စတဲ့ မြေပုံ ၃ခုလုံးမှာပါဝင်ပါတယ်။ ( မိုးရာသီနဲ့ Snow Area လည်းပါဝင်မယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်)
Three Wheeler Rickshaw နမူနာ ခန့်မှန်းပုံစံ ၁
Three Wheeler Rickshaw နမူနာ ခန့်မှန်းပုံစံ ၂
လက်ရှိနောက်ဆုံး Stable Update ဖြစ်တဲ့ Version 0.9.0 မှာတော့ ညအချိန် (Night Mode) နဲ့ အဲ့ဒီ့အချိန်မှာအသုံးပြုနိုင်မယ့် ညကြည့်မျက်မှန် တို့ကို Erangel Map ထဲမှာတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ မော်တော်ယာဉ်အသစ်ဖြစ်တဲ့ Rony Pickup Truck ကိုလည်းတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်သလို ကားစီးတဲ့အချိန်မှာလည်း သီချင်းတွေကို Random ဖွင့်ပေးထားပါသေးတယ်။ လက်နက်တွေထဲမှာတော့ Sanhok မှာရှိတဲ့ QBU DMR ရိုင်ဖယ်အစား Mini 14 ကိုပြောင်းပေးထားပါတယ်။
နောက်လာမယ့် Update ရာသီအသစ်တွေကို ဘယ်လိုမျိုးခက်ခက်ခဲခဲ ဖြတ်သန်းရမလဲ၊ လက်နက်အသစ်ကရော ဘယ်လောက်ထိရောက်မှုရှိမလဲ၊ ယာဉ်အသစ်ကရော မောင်းလို့ကောင်းပါ့မလား စတဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာတွေအပြည့်နဲ့ စောင့်ကြိုနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ Snow Area ဟာ ချစ်သူကောင်မလေးနဲ့ ရိုစရာနေရာအသစ်တစ်ခုလည်းဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
ရာသီအသဈ၊ လကျနကျအသဈ နဲ့ ယာဉျအသဈတှပေါလာမယျ့ PUBG Mobile Update
Tencent Games က PUBG Mobile Player တှအေတှကျ မိုးလကွေမျးကွမျးနဲ့ သဘာဝကကြ တိုကျပှဲဝငျရမယျ့အစီအစဉျတဈခုကို စတငျစမျးသပျနပေါပွိ။ မိုးရာသီ၊ နှငျးတှကေိုမွငျရမယျ့ Snow Area၊ လကျနကျအသဈတှနေဲ့ စကျတပျယာဉျအသဈတှပေါဝငျမယျ့ Beta Version ကိုတရုတျပွညျတှငျးမှာ စမျးသပျကစားနိုငျဖို့အတှကျထုတျပေးလိုကျပါပွီ။ Reddit User တှရေဲ့ ပွနျလညျပွောဆိုခကျြအရ အခု Feature အသဈတှဟော လာမယျ့ PUBG Stable Update Version မှာပါဝငျလာမှာဖွဈပွီး Version Build No ကတော့ 0.11.0 ဖွဈမယျလို့ဆိုပါတယျ။
PUBG Mobile ဟာ Timi နဲ့ Lightspeed ဆိုပွီး Version ၂မြိုးခှဲထားပါတယျ။ Timi ကတော့ တရုတျပွညျတှငျး App Market မှာသာရရှိနိုငျပွီး Lightspeed ကတော့ Global အတှကျဖွဈပါတယျ။ အထကျမှာပွောခဲ့တဲ့ Feature အသဈတှဟော Timi ရော Lightspeed Version ၂မြိုးလုံးအတှကျ တရုတျမှာ စမျးသပျနပွေီဖွဈပါတယျ။
လကျနကျသဈအနနေဲ့ PC Version က MK 47 သနေတျအသဈပါဝငျလာမှာဖွဈသလို၊ ယာဉျအသဈအဖွဈ Tuski လို့ချေါတဲ့ Three Wheeler Rickshaw (သုံးဘီးဆိုငျကယျ သို့ စကျဘီး) နဲ့ Snow Area ကိုတော့ Sanhok Maps ထဲမှာသာ တှမွေ့ငျရနိုငျပါတယျ။
MK 47 ကတော့ Erangel ၊ Miramar နဲ့ Sanhok စတဲ့ မွပေုံ ၃ခုလုံးမှာပါဝငျပါတယျ။ ( မိုးရာသီနဲ့ Snow Area လညျးပါဝငျမယျလို့မြှျောလငျ့ရပါတယျ)
Three Wheeler Rickshaw နမူနာ ခနျ့မှနျးပုံစံ ၁
Three Wheeler Rickshaw နမူနာ ခနျ့မှနျးပုံစံ ၂
လကျရှိနောကျဆုံး Stable Update ဖွဈတဲ့ Version 0.9.0 မှာတော့ ညအခြိနျ (Night Mode) နဲ့ အဲ့ဒီ့အခြိနျမှာအသုံးပွုနိုငျမယျ့ ညကွညျ့မကျြမှနျ တို့ကို Erangel Map ထဲမှာတှမွေ့ငျနိုငျပါတယျ။ မျောတျောယာဉျအသဈဖွဈတဲ့ Rony Pickup Truck ကိုလညျးတှမွေ့ငျရမှာဖွဈသလို ကားစီးတဲ့အခြိနျမှာလညျး သီခငျြးတှကေို Random ဖှငျ့ပေးထားပါသေးတယျ။ လကျနကျတှထေဲမှာတော့ Sanhok မှာရှိတဲ့ QBU DMR ရိုငျဖယျအစား Mini 14 ကိုပွောငျးပေးထားပါတယျ။
နောကျလာမယျ့ Update ရာသီအသဈတှကေို ဘယျလိုမြိုးခကျခကျခဲခဲ ဖွတျသနျးရမလဲ၊ လကျနကျအသဈကရော ဘယျလောကျထိရောကျမှုရှိမလဲ၊ ယာဉျအသဈကရော မောငျးလို့ကောငျးပါ့မလား စတဲ့ စိတျဝငျစားစရာတှအေပွညျ့နဲ့ စောငျ့ကွိုနမှောဖွဈပါတယျ။ Snow Area ဟာ ခဈြသူကောငျမလေးနဲ့ ရိုစရာနရောအသဈတဈခုလညျးဖွဈလာနိုငျပါတယျ။
by PhoneHayKo .4hours ago
by PhoneHayKo . 10 hours ago